Fahafatesana Knight Frost amin'ny ady ho an'i Azeroth | Ady ho an'i Azeroth, Knight Knight, Vaovao | WoW Guides | WoW Guides
Fahafatesana Knight Frost amin'ny ady ho an'i Azeroth
Adriel Diaz | | Ady ho an'i Aterota, Fantsom-pahafatesana, About us
Hey tsara! Manao ahoana ny fiainanao any amin'ny tranomaizina isan-karazany ao Northrend? Androany aho te-hitondra anao ny fanovana rehetra natao tamin'ny Death Knight Frost any Battle ho an'i Azeroth sy izay azontsika jerena ao amin'ny Beta. Raha tsy misy resaka intsony dia aleo hihaona ireo fanovana rehetra.
1 Fahafatesana Knight Frost amin'ny ady ho an'i Azeroth
Ady ho an'i Aterota
Ny herin'ny fahavetavetana: Rava ny grevy fitokonana manana vahana 20% handavoana ny fahavalo ambany ary hanaitra azy ireo mandritra ny 2 seg. Gaga ny mpilalao mandritra ny 5 seg.
Pulse be volo: Raha mbola latsaky ny 2 ny rune feno vitanao dia hitaratra mangatsiaka be ny fanafihan'ny fiara anao, miatrika (40% ny herin'ny Attack) p. Fanimbana fanala amin'ny fahavalo rehetra manodidina.
Fitaovam-piadiana Rune noana: Manome hery ny fitaovam-piadiana rune anao, mahatonga anao hahazo rune 1 sy 5. Runic Power eo noho eo ary isaky ny 1.5 seg, manome 20% Haste mandritra ny 12 seg.
Fiarovan-tena mihetsiketsika: Ny Shell-Anti-Magic anao dia mitelina fahasimbana 35% bebe kokoa ary miteraka herinaratra Runic 100% bebe kokoa.
Asphyxiate: Atsangano hiala amin'ny tany ny fahavalo, manorotoro ny tendany amin'ny angovo maizina ary manaitra azy ireo mandritra ny 4 segondra.
Fifanarahana maty: Mamorona pacte misy fahafatesana ianao hanasitranana anao amin'ny 50% amin'ny fahasalamanao fara-fahakeliny, fa kosa handray 30% amin'ny fanasitranana faratampony ho an'ny 15 seg.
Fahatezeran'i Frostwyrm: Miantso an'i Frost Wyrm izay mamoaka fofonaina (hery manafika 300%). Manimba ny fanala ary mampihena ny hafainganam-pandehan'ny 50% mandritra ny 10 seg ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 40 metatra eo alohanao.
mandeha an-tongotra: Midira ao amin'ny Shadowlands, esory ny vokatry ny faka rehetra ary ampitomboina 70% ny hafainganam-pandehanao mandritra ny 4 seg. Ny fanaovan-javatra hafa rehetra dia hanafoana ity fantsona ity. Raha miasa ny Wraith Walk dia tsy azo ahena ambany ny 170% ny hafainganam-pandehanao. Ny cooldown dia nitombo ho 1 minitra.
riaka: Raha miasa ny Pillar of Frost dia miatrika fifandonana ny fitsikerana anao Ny fampiasana Howling Blast raha miasa ny Frost fotsy avelao hianjera amin'ireo fahavalonao eo akaiky eo ny icic miboridana, mandratra (50% 8.9% herin'ny fanafihana) p. Fahasimban'ny fanala.
Sleet manajamba: Jamba ny kendrena ao anaty kônta eo alohanao ka mahatonga azy ireo hirenireny tsy mahita saina mandritra 4 seg 5 seg. Ny fahasimbana dia afaka manafoana ny vokany.
Niaina ny Sindragosa: Areti-mandringana (316% 45% herin'ny fanafihana) p. fahasimban'ny Aloka mangatsiaka fanala isaky ny 1 seg ny fahavalo ao anaty kôn eo alohanao. Ny fifanarahana dia mampihena ny fahasimban'ny tanjona faharoa. Mbola hanohy miaina ianao mandra-pahalany ny herin'ny runika na manafoana ny vokany.
Zavona mangatsiaka: Fangirifiriana sy fikoropahana achost a 20% 15% fahasimbana bebe kokoa. Ny White Frost dia mampitombo ny fahasimban'ny Howling Blast amin'ny 100%.
frostscythe: Fanafihana mamely izay mamely ny fahavalo rehetra eo alohanao, mifanatrika (135% 14% Fanafihana hery) p. Fahasimban'ny fanala. Ity fanafihana ity dia mahazo tombony amin'ny Killing Machine. Fihetsiketsehana mahatsikaiky amin'ny fifanarahana Frost Scythe in-4 simba ara-dalàna.
Fandrosoana mialoha ny glasy: Fantsom-panala miakatra avy amin'ny tany miakatra izay miteraka (375% 70% herin'ny fanafihana) p. Fahavoazan'ny fanala amin'ny fahavalo akaikin'ny toerana ivoahany.
satroka gilasy: Ny fiantsoana anao amin'ny Frost Strike / Frost Scythe ary mihena ny mitokana 1.0 s 3.0 s ny cooldown sisa tavela amin'ny Andry-fanala Manome fitaovam-piadiana rune.
Tono mangatsiaka: Fitokonana fanala ary Fofonain'i Sindragosa mampitombo ny hafainganam-pandehan'ny fanafihanao melee koa 12% 5% ho an'ny 6 seg. Miorina hatramin'ny in-3 izy.
Fanafihana tsy lafo: Mandritra ny ady tsy misy fahavalo ao anatin'ny 8m, mahazo Attackless Attack ianao isaky ny 1 s. Ny stack tsirairay dia mahatonga ny fanafihana fiara manaraka anao hiatrika (hery manafika 100%) ho an'ny fahasimbana. fahavoazana bebe kokoa amin'ny Frost isaky ny 8 segondra. Ity vokatra ity dia mitambatra hatramin'ny in-5. Ny Obliterate sy Frost Scythe dia mandany stack iray hiatrehana fahasimbana fanampiny an'ny Frost (herin'ny fanafihana 20%).
Fahombiazana mamono olona: Ny fandaniana ny vokan'ny Machine Killing dia manana vintana 50% hahatonga anao hahazo rune 1 hanome anao rune.
mivaingan'ny hatsiaka,: Rehefa miatrika fahasimbana ianao Ny fanafihan'ny fiara anao dia manome anao ampinga mahazaka mitovy amin'ny iray 100% 40% fahasimbana nosedraina.
hampanjavoniny: Ho an'ny 10 seg manaraka, Fikomiana mamono Frost sy milomano famaohana milina famonoana, ary i ravage dia vidiana rune 1 kely ary ny vidin'ny Obliterate dia ahena 1 rune.
Tonga ny ririnina: Ny fahavalo dia nokapohin'i Winter in 5 tsy nisy nenina raha miasa ny Pillar of Frost dia gaga izy ireo mandritra ny 4 seg miorim-paka 8 segondra izy ireo.
Andry-fanala: Mampitombo ny herinao amin'ny 20% ny herin'ny Frost ary manome anao tsimatimanota amin'ny fiantraikan'ny fihetsiketsehana ivelany toy ny knockdowns. Maharitra 20 seg.
Fitokonana ho faty: Ny fanasitranana ny fitokonana ho faty dia nitombo 50%.
Manomeza fitaovam-piadiana Rune: Alefaso ny fitaovanao, mampihetsika avy hatrany ny rune rehetra anao mandritra ny 25. ny hery runic. , fahazoana haingam-pandeha 15% ary miteraka rune 1 sy Runic Power 5 avy hatrany isaky ny 5 segondra mandritra ny 20 segondra. Ny vidin'ity fahaiza-manao ity dia nesorina ary ny cooldown dia 2 minitra izao.
Fitokonana fanala: Mameleza fahavalo eo noho eo amin'ny fitaovam-piadianao ankavia, mifampiraharaha 280% [(Herin'ny fanafihana 27%) + (Herin'ny fanafihana 27%)] p. Fahasimban'ny fanala.
Fipoahana: Mamely ny lasibatra amin'ny rivotra mangatsiaka, mifampiraharaha (82.5% 13.4316% herin'ny fanafihana) p. Fanimbana fanala sy (herin'ny fanafihana 66%). Fahavoazana fanala amin'ny fahavalo hafa rehetra ao anatin'ny 10 metatra, ary mihatra amin'ny tanjona rehetra amin'ny Frost Rush. Frost Fever: aretina izay mamely [8 * (55% hery fanafihana)] p. Ny fahasimban'ny fanala amin'ny 24 segondra ary manana fotoana hanomezana ny Death Knight 5. ny herin'ny runic isaky ny miatrika fahasimbana.
Tazo fanala: Areti-mifindra [8 * (55% 112% hery manafika)] ​​p. Ny fahasimban'ny fanala amin'ny 24 segondra ary manana fotoana hanomezana ny Death Knight 5. ny herin'ny runic isaky ny miatrika fahasimbana.
Herim-poikitra amin'ny ranomandry: Mihamangatsiaka ny rànao, manome anao tsimatimanota amin'ny effet stun ary mampihena a 20% 30% ny simba rehetra azonao mihoatra ny 8 seg.
Fifehezana: Heart Frozen: Mampitombo ny fahasimbana rehetra avy amin'ny ny fahaizanao ny Frost nampidirina 12%.
obliterate: Fanafihana mahery vaika miaraka amin'ireo fitaovam-piadiana roa izay mamely ny totalin'ny (456% + 456%) (Herin'ny fanafihana 60%) + (Herin'ny fanafihana 60%) p. fahasimbana ara-batana.
Ririnina tsy misy nenina: Mandany ny hafanan'ny fiainana amin'ireo fahavalo akaiky rehetra, mifampiraharaha [9 * (36% 4.7502% hery manafika)] ​​p. Manimba ny 8 segondra ny fanala ary mampihemotra ny hafainganam-pandehany 50% 20%.
Fampaherezana Runic: Rehefa lany hery runika ianao dia manana 1.50% 2.0% mety amin'ny Makà rune isaky ny teboka amin'ny hery runic nandany. mahazo rune.
Talenta manome voninahitra
Fitsipika mangatsiaka: Fifandonana ny Ny fahasimbana dia mitovy amin'ny 3% amin'ny fahasalaman'ny lasibatra satria fahasimban'ny Frost ary mampihena ny hafainganam-pandehany 70% mandritra ny 4 seg. Ny hatsiaka be dia be tampoka 9 eo anelanelan'ny tanjona akaiky indrindra.
Simulacrum maizina: Mametraka paroasy maizina a mpilalao fahavalo maharitra 12 seg. Mandrisika amin'ny manaraka ny fahavalo mandany mana amin'ny tsipelina, mamela ny Death Knight hamoaka replica marina an'io ody io. Manohitra ny fahavalo tsy mpilalao dia maka ozona manimba fotsiny.
Aura manimba: Ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 10 metatra dia lo sy mihena tsimoramora ny 3% amin'ny fahasalamany lehibe indrindra isaky ny 2 seg. Miangona hatramin'ny in-5 izy. Maharitra 6 segondra.
Fikasana mamono olona: Mampihorohoro ny kendrena ary mihabe 5% 3% ny fahavoazany dia nihoatra ny 6 seg. Ny mpilalao tsirairay manafika ny kendrena dia mampitombo ny fahasimbana nalain'ny 5% 3% fanampiny Miangona hatramin'ny in-5 izy. Ny fanafihana an-kira dia mamerina ny faharetan'ny Intimidated.
Fitaovam-piadiana mahery vaika: Ny cooldown an'ny Empower Rune Weapon dia ahena 2 min. Ahenao 50% ny cooldown an'ny Empower Rune Weapon fa rune telo fotsiny no hihetsika.
Tundra stalker: Ny fahasimbana atrehin'ilay Frost Strike anao dia nitombo 15% ho an'ny tanjona kendrena, ary ny voka-dratsin'ny fikomiana dia nitombo 50% ho an'ny tanjona miorim-paka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » About us » Fahafatesana Knight Frost amin'ny ady ho an'i Azeroth
Fandrafetana amin'ny ady ho an'i Azeroth
Ra Knight Knight amin'ny ady ho an'i Azeroth